10 Inotyisa LGBT Nzvimbo Dzakanaka | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Inotyisa LGBT Nzvimbo Dzakanaka
Kunyangwe uri diva, fashionista, queer, ngochani, ngochani, kana kusagadzirira kuzvitsanangudza, izvi 10 dzinotyisa LGBT nzvimbo dzinojoinha nekukupemberera iwe. Kubva kutsvoda muParis kuenda kumapati kunge nyeredzi yedombo muBerlin, aya anoshamisa maguta eEurope zvese nezvekodzero dzakaenzana, kudada, uye rudo mune ese mavara emuraraungu.
1. Anotyisa LGBT-Akashongedzwa Ekuenda Munyika: Berlin
Izvo zvese zvakatanga nenheyo yeiyo yekutanga ngochani uye ngochani sangano munyika. 1897 ndiro gore rakaratidza danho rekutanga mukati Shanduko yeBerlin kune iyo ngochani uye ngochani guta guru renyika.
Runako uye rudo zvinouya nenzira dzese, mavara, uye bonde. Berlin ndeimwe yevanonyanya kushivirira, kuvhura, uye kugamuchira maguta munyika. Berlin inotyisa LGBT kuenda kuEurope uye inogamuchira mhando dzese dzerudo. nhasi, berlin ndiyo yekupedzisira LGBT kuenda, asi yakawana mukurumbira wayo chete mukufamba kwezana ramakore rechi20, yakanakisa kwazvo nzira refu yakaitwa neguta.
Nollendorfplatz muSchoneberg ndiwo moyo uye mweya wemusango wechiitiko chinozivikanwa chevane ngochani muBerlin. pano, unogona kupati, zvako, drink, uye unakirwe neiyo LGBT hupenyu netsika.
Iyo yakanakisa nguva yekuona iyo LGBT extravaganza inguva yezhizha, mune epic CSD Berlin. Zvinenge 1 mamirioni vanhu uye mazana ezvishongedzo zvakashongedzwa zvinogadzira imwe yeakanyanya kudada mafaro mupasi, yekodzero dzakaenzana uye rusununguko rwekuda mune ese mavara e muraraungu.
Zvakanakisa Zvinhu Zvekuita
Shanyira gay Schwules Museum, chiyeuchidzo chekutanga chechikwata chevane ngochani, iyo inozivikanwa Marietta bhawa, Cafe Berio, yechinyakare Heile Welt ngochani kirabhu, kana kune yakanakisa queer pati muKitKat-Klub.
2. Inotyisa LGBT Kuenda MuNetherlands: Amsterdam
Paunenge uri iwe wekutanga nyika kupamhidzira kuroorwa-pabonde, iwe uri zvakare imwe yenzvimbo dzinotyisa uye LGBT-dzine hushamwari munyika. saka, inonakidza uye inoshamisa Amsterdam raive guta rekutanga muEurope kutora maGay Games mu 1998 uye kudada kwekumhanyisa kweAmsterdam kunoonekwa seimwe yeakanakisa pasirese.
Kana iwe usingazive nzvimbo dzekurova muguta, wobva wamira pa Pink Nongedzo, iyo nzvimbo yeruzivo nezve LGBT- nzvimbo dzakanaka muAmsterdam. Amsterdam ine inotyisa Nightlife mamiriro, asi zuva risati ravira, iwe unofanirwa kufamba-famba mumigwagwa inotevera nenzvimbo, uko iyo LGBT chiitiko ichifema nekukanda: Anokuremara, nhoroondo Kerkstraat, Amstel, uyezve kuZeedijk neWarmoesstraat yechiitiko chinonakidza cheLGBT chehusiku muAmsterdam.
Tsvaga iyo yakashata yekukwevera chiitiko muQueen's Head, sveta pane yekudyira muGetto, tora kufemerwa muchitoro chemabhuku cheLGTB cheAmsterdam, Merry, uye pati kuTaboo kana Exit makirabhu mumugwagwa weReguliersdwarsstraat. Pamusoro pe, iyo Amsterdam canal kudada ndeimwe yeakanyanya kusarudzika mafaro ekushanyira munyika.
3. Yakanakisa LGBT Yemahara Ekuenda MuUK: Brighton
Kubva kuma1930's Brighton yakave nzvimbo yakachengeteka kune wese munhu aifanira kuongorora hunhu hwavo. Iro raimbova gungwa reguta rave rine hushamwari LGBT kuenda kuUK, pedyo asi kure neguta guru.
Kemp Town nharaunda ndiyo LGBT nzvimbo muBrighton, kuvonga kumahotera ayo emahotera, Pubs, nemaresitorendi. pano, iwe unowana zvinoshamisa vibes, inotonhora mamiriro ezvinhu kwaunogona kupemberera rudo mune ese mafomu. Uyezve, kana uri kuronga kuenda nenzira yese newako mudiwa, ipapo Brighton ane dzinopfuura nzvimbo dzinoverengeka dzemuchato seRoyal Pavilion, uye kubva ipapo unotanga mafaro paCharles Street kana Brighton pamhenderekedzo.
Nakidzwa pint mune ngochani Iyo Bulldog pub, asi tanga wazorora muThe Brighton Sauna, uye pedzisa husiku muna Revenge, iyo yepamusoro LGBT kirabhu yehusiku.
4. Awesome LGBT Hushamwari Guta MuGerman: Cologne
Guta rine akawanda emabhawa kupfuura vanhu, uye zviitiko zvekudada kupfuura chero kupi, Cologne ndeimwe yenzvimbo dzinotyisa uye LGBTQ-dzakanaka muEurope. Cologne ndeye LGBTQ-inoshamwaridzika zvekuti ine yayo yega Gaily rwendo, kuitira kuti iwe ugone kuwana zvakavanzika zvakachengetedzwa zveguta zve chero chinonaka uye muraraungu murwi.
Pamusoro pe, Cologne ndiyo yekupedzisira LGBT kuenda, nekuti ine 2 ngochani zviitiko, ehe ndizvozvo. Iyo yekare Heumarkt-Mathiasstrasse uye yeguta reBermuda Triangle kune vadiki boka. Kumadokero kune mapato akanakisa uye makirabhu ekutamba kuti azununguse muviri wako uye mabvazuva kunzvimbo dzakadzikira dzakadzikama uye dzechivanhu hangout.
Hauna nguva yekushanyira ese ari maviri? Hapana kunetseka! Nekuti neS-Bahn yepasi pechitima, unogona kufamba uchidzoka nekudzoka kakawanda sezvaunoda uye nekukurumidza zvakanyanya.
Usapotsa Cologne's Christopher Street Day, iyo inozivikanwa pasi rese yeCologne Pride hongu. Pamusoro pe, Musika weKisimusi weGay, uye Carnival munaFebruary. Nezve-after-party tarisa Deck 5 kana Amadeus.
Berlin kuenda kuAachen Nechitima
Frankfurt kuCologne Ine Chitima
Dresden kuCologne Ine Chitima
Aachen kuCologne Ine Chitima
5. Inotyisa LGBT Yemahara Kwayakaenda MuFrance: Paris
Guta rine rudo kwazvo pasi rose rinopemberera rudo mineti yega yega yezuva, uye unogamuchirwa kwazvo kupemberera rudo rwako mune ese mavara e muraraungu. Yakazara glam, chimiro, kirasi, uye kunakidzwa, Paris ndeimwe yeanotyisa LGBT- nzvimbo dzakanaka munyika.
Iyo inonaka Marais ndiyo yepakati peiyo ngochani nzvimbo muParis, nenzvimbo dzese dzinozivikanwa dzeLBBT dziri munzvimbo inozivikanwa yePeace de la Bastille, Republic Square, uye Hotel de Ville. Mugore rose, kubva munaNdira kusvika Chikunguru, kune zviitiko zvinoshamisa zvakatsaurirwa kunharaunda yeGBBT: mitambo, hunyanzvi, firimu, uyezve kudada kunoratidzira. pano, uchanzwa uri pamba chaipo, uye uine yakawanda nzira dzekutsvaga LGBT French nharaunda uye uwane Paris.
Raidd Barn yevanotamba-vanoenda uye kutamba kwakasununguka, Debonair cafe padenga reCite de la Mode et du Dhizaina yemacaroon uye anoshamisa maonero eSeine, uye Badaboum bistro mudunhu reBastille kune vese vatsva uye vane fashoni maartist eFrance, uye kutsvoda neEiffel Tower kumashure.
6. Inotyisa LGBT Guta Rakanaka MuAustria: Vienna
Iyo yakapfuma yeAustria nhoroondo uye tsika zvizere nezve nyaya nezve ngochani madzimambo, saka kuve LGBT- hushamwari chikamu cheguta rino rakanaka reDNA. saka, hazvishamise kuti muVienna unogona kuenderera 2 Gay guta kushanya kuti uwane nhoroondo yenharaunda yeGBBT uye hupenyu. Pamusoro pe, zvakafanana kune dzimwe LGTB nzvimbo dzakanaka pane yedu runyorwa, kune zvimwe zviitiko zve LGTB kupfuura zvaunogona kuverenga gore rese.
Imwe yeakanyanya kukosha LGBT zviitiko zvegore iri Rainbow Bhora. Hotera Schonbrunn iri kubata iri bhora rakakura, uko kwaunogona kutamba iyo Waltz uye kuratidza yako yepamoyo pfungwa yemafashoni mune anoshamisa mabhora bhora uye tuxedos.
Edzai kofi yeViennese muCafe Savoy, pati pamwe naMiss Candy mudenga Vienna kirabhu, ndinoti Ini ndinopinda munzvimbo inoshamisa yeAlpine, uye tora mapikicha ako emuchato kana guta rakashamisa zvivakwa zvakakukomberedza.
7. Inotyisa LGBT Guta Rakanaka MuIreland: Dublin
Zvichida Ireland inozivikanwa nevakawanda seyakaomarara, vechitendero, uye chando munguva. zvisinei, handizvo zvakaitika neDublin iyo ine simba, mafaro, uye chaizvo LGBT- shamwaridzana. mu 2015, kuroora ngochani kwakave pamutemo, chiitiko chinoshamisa mukushandurwa kweIreland kuve yakasununguka, uye nyika yakavhurika.
saka, iwe uchawana Dublin imwe inoshamisa imwe LGBT- ushamwari kuenda kuAmsterdam uye berlin. June mwedzi wekuzvikudza muDublin, asi iwe unofanirwawo kuongorora iyo International Dublin Gay Theatre Festival, chikuru munyika.
Cocktails kana mapato kuGeorge Bar, ngochani nzvimbo muDublin, PantiBar, Oscars Cafe, cruising, kana ngochani sauna yekuzorora ndizvo zvekupedzisira zvinhu zvekuita kuti unakirwe chaizvo inoshamisa LGTBQ nharaunda muDublin.
8. Inotyisa LGBT Shamwari Kwamunoenda: Bherujiyamu
Ghent neBrussels dzinozivikanwa se 2 dzinotyisa nzvimbo dzeBBBT-dzakanaka muBelgium. Nyika ino yaive yechipiri kunyoresa zviri pamutemo kuroorwa kwevanhurume nevanhukadzi. MuBrussels, Rue du Marche au Charbon ndiyo nzvimbo yechiitiko cheGBBT.
Semuyenzaniso, muRainbow House, unogona kunakidzwa neLesborama firimu mutambo, Kunstausstellungen, uye zvimwe zvakawanda zvetsika zviitiko. zvisinei, kana uchida kuratidzira zvawakapihwa namama zvakasikwa, ipapo Chez Maman anogamuchira divas mune ese mavara uye kupenya kwemuraraungu.
9. Inotyisa LGBTQ Shamwari Kwamunoenda: London
Iyo West End, Pubs, akitekicha, mambokadzi. London chiratidzo kwete chete nekuda kwevehumambo, asi nekuti inoshamisa LGBT kuenda kuEurope. Guta iri microcosmos kune nyika, zvichireva iro guta rinotambira vanhu kubva kumativi ese epasi, zvakare inodziya uye inoshamwaridzika kune ngochani, ngochani, queer, kana transgender.
Zvitoro zvemabhuku zvega, zvinoshamisa matenga edenga, mitambo, nemumhanzi, ILondon ine nzvimbo dzakawanda dzinonakidza dzekunakidzwa neakanakisa ehupenyu hweLBB uye tsika.
saka, kana iwe uchida kunakirwa nezvakanakisa zve LGTB muLondon, musoro kuDlastone Superstore kune yakanakisa cabaret. Yeye yakanakisa queer chiitiko, Iyo Glory pub yakanakisa, uye ive shuwa yekumira neyekare LGBT chitoro chemabhuku muEngland, Ngochani Izwi.
10. Yakakura LGBT Nzvimbo Dzakanaka: Milan
Kusiyana nemamwe maguta ane hushamwari eLBBT pane edu runyorwa, Kodzero dzeLGBT hadzibvumirwe zviri pamutemo muMilan. Kunyange zvakadaro, iyo fashoni uye runako capital munyika iri kuzviratidzira ine yakajeka ngochani chiitiko uye kunyange inotungamira yegore negore LGTBQ firimu mutambo.
Paunenge uri muMilan, iyo nharaunda yePorta Venezia ndiwo moyo weiyo LGBT hupenyu netsika. Pamigwagwa yeLecco neSan Martini, iwe uchawana anotonhorera kupfuura ngochani-ane hushamwari mabhawa uye makirabhu.
Zviri nyore kwazvo kudzidzisa kufamba kwakatenderera muEurope uye kufamba ne Save A Train asi hazvisi nyore nguva dzose kuwana zvinotyisa nzvimbo dzeBGBT, saka ndosaka isu takakunyorera iyi blog positi iwe.
Iwe unoda kupinza yedu blog positi "10 Inotyisa LGBT Nzvimbo Dzinoshamisira" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fawesome-lgbt-friendly-destinations%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
ngochani ngochani LGBT LGBTkusarudzwa kweEuropean LGBTfriendlycities LGBTF FriendlyDestinations LGBTQ PrideParadeEurope